10 Go'aannada Sannadka Cusub ee Waara! - Xarunta EcoTechnology
Waa sanad cusub! Maaddaama qof walbaa dejinayo himilooyinkiisa sannadka 2022, halkan waxaa ku yaal xoogaa waara oo sannadka cusub ah oo kaa caawin kara inaad saameyn ku yeelato deegaanka!
1. Shandadaha ku soo qaado boorsooyin dib loo isticmaali karo
Bacaha balaastigga ah waa ku habboon yihiin, hase yeeshee sahlaanshahoodu qaali bay ku yihiin deegaanka. Way adagtahay in dib loo warshadeeyo oo badanaa waa la tuuraa. Balaastikku wuu dillaacaa, laakiin qashin qubka wuxuu ku qaadan karaa ilaa 400 sano; kaaga darane, waligeed ma noqonayso agab kale. Waxay u kala baxdaa qaybo yaryar oo balaastig ah oo aan wali sii noolaan karin. Boorsooyinka dib loo isticmaali karo ayaa beddel weyn u ah bacaha balaastigga ah. Way yar yihiin raqiis, waqti dheer ayey qaataan, waxayna gacan ka geystaan ​​sidii loo ilaalin lahaa meeraha! Iyaguna way fiican yihiin maxaa yeelay xitaa waxaad dooran kartaa daabacado iyo qaabab xiiso leh oo aad ku raaxaysato!
2. Soo qaado dhaladaada biyaha dib loo isticmaali karo
Dhalooyinka caaga ah ayaa noqday badeecad caadi ah. Sida laga soo xigtay EPA, toddobaad kasta, Mareykanku waxay iibsadaan dhalooyin biyo ah oo balaastig ah oo ku filan oo ay ku wareegaan dhulka shan jeer! Waxaad sameyn kartaa farqi weyn haddii aad isticmaasho dhalada biyaha dib loo isticmaali karo oo aad iska ilaaliso inaad iibsato dhalooyinka caagga ah. Waxay kuu keydin doontaa lacag mustaqbalka fog waxayna kuu ogolaaneysaa inaad doorato qaabka iyo nooca dhalada biyaha aad rabto. Beddelkan fudud wuxuu kaa caawinayaa adiga iyo deegaanka!
3. Tirtir tamarta ifka
Tamarta "Phantom" (oo sidoo kale loo yaqaan "vampire" tamar) waa tamarta ay isticmaalaan aaladaha elektaroonigga ah ee sii wadaya inay soo jiitaan awoodda inkasta oo ay "ka maqan yihiin" Qalab kasta oo leh "heegan" ama "deg deg ah" goob waa vampire tamar. Sida laga soo xigtay Waaxda Tamarta, Vampires tamarta waxay ku dari kartaa ku dhowaad 10% ee biilka korontada ee bil kasta ee qoysaska. Waxaad lumin laheyd boqollaal doolar 'koronto qiimaheeda sanad walba! Adiga oo isticmaalaya xargaha korantada caqliga leh waxaad ku keydin kartaa lacag iyo tamar. Qaar ka mid ah Power Strips Advanced (APS) waxay ka hortagi karaan elektiroonigga inay soo jiidaan awoodda adoo wata qalab si toos ah u xiran oo damin kara dhamaan aaladaha ku rakiban APS marka aadan isticmaalin. Waxa kale oo jira xeedho oo joojiya tamarta marka ay batteriga aaladda ka buuxaan. Fiiri tan infographicfurayaa faylka PDF ka DOE si aad u aragto xulashooyinka kala duwan ee la heli karo.
Ma ogtahay in aaladaha elektaroonigga ah ay sii wadi karaan inay soo jiidaan korontada xitaa marka ay dansan yihiin?
4. Iska yaree qaadashada hilibka
Cunnooyinka khudradda ayaa ku koray caan ahaanshahooda si ay isugu dayaan oo u yareeyaan kuwa u dhigma kaarboonka. Si kastaba ha noqotee, cunitaanka maxalliga ah iyo / ama ka leexashada hilibka cas ayaa sidoo kale saameyn weyn ku yeelan kara yareynta qiiqa. Sida laga soo xigtay isku-dubaridka Jaamacadda Michigan, cunista dhammaan cuntooyinka maxalliga ah lagu beero muddo hal sano ah waxay badbaadin kartaa u dhiganta wadista 1,000 mayl, halka cunista khudradda maalin kasta toddobaadkii ay badbaadin karto u dhiganta wadista 1,160 mayl. Haddii aad ku beddeli lahayd dhammaan hilibka lo'da digaag muddo hal sano ah, taas oo u horseedi karta hoos u dhigista raadadka kaarboonka sanadkiiba 882 kaarboon rodol!
5. Dhig dharkaaga si aad u qalajiso
The NRDCfurayaa faylka PDF ayaa soo saaray warbixin kooban oo lagu ogaaday in dadka Mareykanku ay sanadkii ku qarashgareeyaan lacag dhan 9 bilyan oo doolar koronto si ay dharka ugu qalalaan Gobol walba oo Mareykan ah awood uma leh inuu dharkiisa ku qalajiyo banaanka sanadka oo dhan, laakiin qalajinta banaanka qeyb sanadka ka mid ah ama adeegsiga sariirta qallajinta ee gudaha waxay ka badbaadin kartaa macaamiisha lacag isla markaana keydin kartaa tamar isla waqtigaas!
6. Xariif ku noqo waxyaabaha la isku qurxiyo
Wax soo saarka maalinlaha ah sida wajiga iyo jirka oo la maydho mararka qaarkood waxa ku jira wax loo yaqaan microbeads si ay kaaga caawiyaan in maqaarkaaga la sii daayo. Microbeads-yadaas balaastigga ah, markii lagu sii daayo badda, waxay waxyeello u geystaan ​​noolaha badda, waxaana laga yaabaa inay ka sii shaqeeyaan silsiladda cuntada si ay u waxyeeleeyaan dadka aadanaha ah ee cuna nolosha badda. Ujeeddo samee si aad u sameyso xulashooyin miyir qab ah si aad uga fogaato alaabada saamaynta xun ku leh deegaanka.
7. Isticmaal alaabta nadiifinta ee deegaanka ku habboon
Si aad ugu fududaato deegaanka iyo jawiga guud ahaan, iskuday inaad iibsato alaabada nadaafadeed ee bey'ada ku habboon. Laga soo bilaabo degreasers-ka la baabi'in karo ee la nadiifiyo saxanka dabiiciga ah, waxaa jira xulashooyin badan dalab caan ah ayaa ka dhigay kuwo la awoodi karo. Kiimikooyinkani waxyeello yar ayey u geysanayaan deegaanka, iyaguna sidoo kale waa ka badbaado isticmaalka qoyska.
8. Yaree isticmaalka tuwaalka waraaqda
Sida laga soo xigtay EPA, warqaddu waa # 1 shey qashinka lagu shubayo. Waa ammaan in la yiraahdo warqaddu waa qayb weyn oo nolosheena ah u guuritaanna qaab nololeed shukumaan-yar ayaa dhib noqon kara. Laakiin waxaad ku bilaabi kartaa inaad dejiso hadaf aad u isticmaasho waraaqo yaryar oo shukumaan ah si aad shaqada u qabato. Shirkadaha qaarkood waxay iibiyaan duub loo qaybiyay qaybo yaryar. Waxaad isticmaali kartaa dabool ama saxan kale si aad ugu daboosho cuntada microwave halkii aad ku isticmaali lahayd tuwaal warqad ah. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa inaad isticmaasho maro-gashiga maro inta lagu jiro cuntada oo aad ku tuuri karto alaabada dharka lagu dhaqo ka dib. Waxa ugu weyn ee ku saabsan maro-gashiga maryaha la isticmaali karo ayaa ah inay yihiin wax iibsi hal mar ah waxayna kaa caawin doonaan yareynta saameynta deegaankaaga!
Maqaar-gacmeedka dharka iyo tuwaalku waa beddelka waara ee warqadaha iyo waraaqaha!
9. Isticmaal baytariyada dib loo isticmaali karo
Batariyada dib loo isticmaali karo ayaa badal weyn u ah baytariyada dhaqameed. Sida laga soo xigtay daraasad ay sameysay Jaamacadda Illinois, qiyaastii 3 bilyan oo baytariya ayaa la tuuraa sanad kasta marka la barbar dhigo 350 milyan oo baytariyada dib loo soo celin karo oo la iibiyo. Maalgelinta bateriga dib loo soo celin karo waxaa laga yaabaa inay sare u kacdo qiimaha hore, laakiin maalgashiga ayaa sii waara. Baytariyada dib loo soo celin karo waxay kuu badbaadin karaan lacag waxayna yareyn karaan wasakheynta deegaanka!
10. Kor u qaad ama ku deeqo!
Haddii aad nadiifinaysid hoygaaga oo aad ka fiirsanaysid inaad alaabada iska tuurtid, halkii aad isku dayi lahayd inaad ku tabarucdo ama ujeeddo cusub siiso! Dib u warshadaynta shay waxay noqon kartaa wax ku ool ah, ama waxaa dib loogu celin karaa madadaalo, mashruuc farsamo gacmeed! Ku deeqida walxaha ayaa ka ilaalinaysa qashin qubka waxayna ka faa'iideysan kartaa bulshada deegaanka.
Samaynta doorashooyin saaxiibtinimo deegaanka waa sahlan tahay inta lagu jiro sanadka, waxay samayn kartaa saameyn dhab ah! Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa aad samayn karto si aad 2022kaaga uga dhigto mid cagaar ah, eeg baloogyadayada hoose.
Isku-darka: Habka ugu Cagaaran (iyo Kan ugu Caansan) ee Dib-u-warshadaynta
Sida loo Cagaar noqdo Nidaamka Dhismahaaga
Qarsoodi oo Dareemo Wanaagsan!
Yaree, Dib u isticmaal, Dib u habeyn, dib u warshadeyn
Tilmaamaha Kaydinta Cuntada si loo Yareeyo Qashinka